छवि र शिल्पाको बिहे हुँदै नभएको कि लुकाएको ? « Ramailo छ
छवि र शिल्पाको बिहे हुँदै नभएको कि लुकाएको ?
निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलबिचको सम्बन्धको चर्चा नयाँ होइन् । छविराज प्रोडक्सनमा शिल्पाले खेलेको पहिलो फिल्म ‘लज्जा’ रिलिज हुंदा चलेको बिहेको चर्चा ‘मंगलम’ को प्रदर्शनक मिति स्थगन हुंदासम्म सेलाएको छैन । के छवि र शिल्पाले बिहे गरिसेकका हुन् या बिहे नै गरेकै छैनन् । यो रमाईलो भिडियो हेर्नुस् :
बुझिए अनुसार छवि र शिल्पाले विवाह गरिसकेका छन् । तर ज्योतिषले बिवाहको कुरालाई तत्काल बाहिर नल्याउन भनेका कारण उनीहरुले यो रहस्यलाई गोप्य नै राखेको बिशेष सुत्र बताउँछ । बिहेपछि छवि र शिल्पा गौरी घाटमा सँगै बस्दै आइरहेका छन् । शिल्पाले पनि छविको माया लाग्ने बताइन् ।